Lasa Mpaka Sary Anaty Vondrom-piarahamonina: Varavarankely Iray Ahitàna Ny “Tena India” · Global Voices teny Malagasy
Lasa Mpaka Sary Anaty Vondrom-piarahamonina: Varavarankely Iray Ahitàna Ny “Tena India”
Voadika ny 23 Septambra 2013 4:04 GMT
Talohan'ny nankanesako tao Ranchi tamin'ny 2012 hanatrika ilay atrikasa voalohany, tsy mbola nitazona fakantsary velively ny tenako hatrizay niainako. Nangovitra ny tanako, ary tena tsy nahazo toky ny amin'ny hahavitako azy mihitsy.
Deena Ganwer, avy any Chhattisgarh (voatanisa ety anaty aterineto ao amin'ny bilaogin'ilay atrikasa), dia iray amin'ireo mpandray anjara tamin'ireo andianà atrikasa momba ny fakàna sary nokarakarain'ny Video Volunteers niarahany tamin'ny Magnum Foundation.
Video Volunteers – manana ny biraony ao Goa, India – dia mikendry ny hanofana sy handrisika ireo mpamokatra media avy eny ifotony haneho ny tantaran'izy ireo manokana mikasika ny vondrom-piarahamoniny misy azy. Manampy ny olona ny Video Volunteers mba hisolo vava amin'ireo olana izay mety tsy ho tratran'ny media mihitsy. Mifantoka amin'ny famokarana sy fanapariahana ireo tetikasa fanadihadiana lalina kosa ny Magnum Foundation; izy no rantsana mpanao asa soa amin'ilay kaoperativa malazan'ny fakàna sary Magnum Photos natsangan'i Robert Capa sy Henri Cartier Bresson tamin'ny 1947.
Usha Patel maka sary ny kaoperativan-dronono tantanin'ireo vehivavy ao Uttar Pradesh.
Ny atrikasa “Fitantaràna amin'ny alàlan'ny Sary” dia itambaranà vondron'olona 20 solotena mpifandray voafantina [CCs] avy amin'ireo vondrom-piarahamonina, izay samy nandray anjara daholo tamin'ilay fanofanana tany amboalohany niarahana tamin'ny Video Volunteers, ary namokatra tsy tapaka lahatsary miresaka ny vondrom-piarahamonin'izy ireo. Ity tambajotranà mpanadihady eny anaty vondrom-piarahamonina ity dia fandaharanasa iray an'ny Video Volunteers izay antsoina hoe IndiaUnheard (IndiaTsyRe), manofana ireo mpifandray avy eny anaty fiarahamonina mba hitrandraka ireo tantara tsy voatatitra – sady hampiditra ireo votoaty novokarina avy eo anivon'ny fiarahamoniny ho ao anatin'ny filazam-baovao nasionaly, na io fahitalavitra mahazatra, na tranonkala anaty tambajotra sosialy.
Avy ao amin'ny tranonkalan'ny Video Volunteers :
Ireny Solotena mpifandray ireny no misolotena ireo endrika tena natao an-jorom-bàla ao India, isan'izany ny Dalits sy ireo olona avy amin'ny foko, hatramin'ireo vitsy an'isa ara-pinoana, ara-piteny ary ara-pananahana… Amin'ny alàlan'ny IndiaUnheard, manolotra ho an'ireo mpihaino eran-tany varavarankely iray mazava tsara ahitàna ny tena India marina ny Video Volunteers. Isanandro, angonina ireo lahatsary avy amin'ny lafivalon'ny firenena ka miresaka momba ireo olana tahaka ny saranga, fifandirana, ny maha-ianao anao sy ny fanabeazana.
Sunita Kasera maka sary fianakaviana iray avy amin'ny foko Gadiyanwal izay miaina eo ivelan'ny sarety iray.
Miantehitra amin'ireo mpandray anjara amin'ny tetikasa IndiaUnheard, Olivia Arthur sy Sohrab Hura, mpaka sary sady mpanofana avy amin'ny Magnum no nampianatra nandritra ireo atrikasa.
Vehivavy no tena betsaka tamin'ny mpandray anjara, hoy i Kayonaaz Kalyanwala, Mpandrindra ny Fandaharanasan'ny Video Volunteers:
Vehivavy no mpirotsaka tena notadiavinay ary nifantenana ireo tena tsapanay fa manana tsara ny fahavononana hikirakira sary, ary koa ireo izay mahita izany ho famporisihana hamokatra lahatsary bebe kokoa… Matanjaka ireo CCs [Community Correspondents] -nay ireo raha resaha hafanam-po saingy indraindray tsy ampy fahaiza-manao amin'ny resaka fikirakirana ny jeren'ny maso, ary fantatray fa fomba goavana ho azy ireo ny fakàna sary mba hampivoaran'izy ireo ny fomba fijeriny.
Avy amin'ireny atrikasa ireny, namorona andianà fanadihadiana kely ny mpandray anjara tsirairay, itantàrany ny vondrom-piarahamoniny. Miresaka zavatra samihafa ireo tantara, isan'ireny ny fibobohana toaka, ny fivarotantena ao an-toerana, ny fitondràna kilema, ary ny olana ara-tontolo iainana.
Babita Maurya maha sary ireo sekoly ao an-toerana.
Ireo solotena mpifandray nanatrika ny fiofanana dia niasa nanodidina lohahevitra mikasika ny vondrom-piarahamoniny, nanadihady ireo tantara sy ny fiainana eo an-toerana misy azy. Ho an'ny sasany amin'ireo mpitatitra, saika ireo olom-pantany no natoniny, raha nahalala tsara ny zavatra hataony kosa indray ireo hafa sasany – nahafahana nahalala amin'ny antsipirihany ny zavatra iainan-dry zareo isanandro. Saroj Paraste, mpaka sary, dia nisafidy ankizivavy iray manana kilema ho ivon'ny fanadihadiany, nahafahany nahalala azy tsara tamin'ny alàlan'ny fiarahany nipetraka tamin'ilay fianakaviana nandritra ny iray herinandro, naka ny fitokisany talohan'ny namoahany ny fakan-tsariny. Voalaza ao amin'ny tranonkalan'ny Video Volunteers i Saroj ho niteny hoe, “Koa satria tsy dia tia nalaina sary loatra rakalakely tany ampiandohana, nandany fotoana maro aho nanao izay hampahazo aina azy. Farany dia nitombo teny ny fitiavany ahy ary dia faly ery izy tafiditra ho isan'ny ao anatin'ilay tetikasako.”
Xavier Hamsay naka sary ankizivavy iray jamba avy ao amin'ny vondrom-piarahamoniny.
Nomarihan'i Kayonaaz fa fomba iray hampidirana ireo solotena mpifandray ireo ho amin'ny sehatra hafa ireo atrikasa ireo mba hahafahan-dry zareo mitantara ny tantarany. Fakantsary tsotra no eny amin'izy ireo, ary adidin-dry zareo isaky ny volana vitsivitsy ny mandefa tahirin-tsary mankany amin'ny Video Volunteers [VV]. Araka izay nambarany tao anaty tafatafa ifanaovana anaty mailaka ,
Tianay ho azo antoka fa vantany vao vita fiofanana ry zareo, dia hanohy hampiasa ny sary ho toy ny fitaovana. Mandritra izany fotoana izany ny VV dia miezaka mampahafantatra ny asan'izy ireo amin'ny alalan'ny fampirantiana sy ireo sehatra media isan-karazany.
Afaka mahita sary maro ianareo ao amin'ny bilaogin'ny tetikasa, sady ho isan'ny mpandray anjara amin'ny asan'ireo Solotena Mpifandray mandritra ny Delhi Photo Festival hatao amin'ny Oktobra 2013 koa ny Video Volunteers.
Nirmala Ekka maka sary ny fiainana andavanandron'ireo mpandroaka fako.
Nahazoana alàlana avy amin'ny Magnum Foundation daholo ny sary rehetra nampiasaina ato.
Fitantanam-pitondrana 2 herinandro izay
Azia Atsinanana 09 Desambra 2021